﻿wax Muhiimada Biyaha Leyihiin
Ka Fogoow Subaga Iyo Buruurta: Ka awoodo inaad cunto baruurta Isku day cuntada leh markastood soo iibsanayso inta subag ku jirta, caanaha laga miirayna cab. Daawada laga qaato steroids wuxuu keena waxyeelayn xun, sidaas awgeed waxaa la isticmaala oo keliya markii ay daawaynada kale la tijaabiyay. Dawaada afka qaato ee steroids keena waxyeelayn sidaas awgeed waxaa la oo markii ay daawaynada kale la tijaabiyay. Carruurta lagu ag sigaar, waxay halis saa'id oh ku jiraan neef. Ogow waxyaabaha kugu kiciyo neefta adigoo ay neefsashadaada sii xumaatey, ama adigoo cabbiraadka neef-baxsiga ugu dheer markii cunto ama qaadato daawo aad malayso inuu kugu neefta.
Aad u samaysid sidaan, waxaa lagaaga baahan yahay inaad cunto caafimaad iyo inaad si joogto ah u jimicsi. Inkastoo oo halis keeni karo, haddii aad qabtid neef aad u xun, waa inaad qaadatid tallal sanadeedka ifilada (durayga). Waa inaad xitta qaadataa tallaalka ka hortagga pneumococcal - oo ah jeermis keena xanuunka sambabaha (pneumonia), meningitis iyo bukashada dhiigga.
Haddii ay calaamadaha neeftaada ay ka duwan yahiin kuwa caadiga ah (uusan caadi ahayn) ama aad qabtid calaamado dheeri oh, waxaa laguu gudbin karaa qaybta xray-ga sidii raajo lagaa saaro xabadka. Haddii uu neefta sii joogto ah kuu qabto, waxaa lagu siin doonaa inhaler cabitaano dabiici ah oo cayilka yareeya kale ee ku jiro lagu magacaabo inhaled corticosteroid. Caadi ahaan talin inaad qaadatid maalintiiba oo inhaled sidii looga hortago in mar labaad dhaco.
← ﻿magic Shifts (kate Daniels) E-book Download ﻿top 25 Photo Studio Director Pages In Greater Nyc Location →